ICosatu izokhetha ubuholi bayo | Isolezwe
ICosatu izokhetha ubuholi bayo
Isolezwe / 29 June 2012, 2:23pm /
UMFELANDAWONYE wezinyunyana KwaZulu-Natal, iCosatu, kulindeleke ukuthi ukhethe ubuholi besifundazwe engqungqutheleni ezoqala ngeSonto, eMgungundlovu.
Le ngqungquthela izovulwa nguNobhala-Jikelele weCosatu, uMnuz Zwelinzima Vavi (osesithombeni), kanti kulindeleke ukuthi icacise ukuthi imiphi ngodaba lokufakwa kwezimayini namabhange ngaphansi kombuso.
Lokhu kuzokwenzeka ngemuva kokuthi izinyunyana ezingamalungu eCosatu zona sezivele zakucacisa ukuthi zifuna izimayini zibe ngaphansi kombuso yize uKhongolose uphikisana nalokhu.
Ngaphandle kwalokho ubuholi besifundazwe beCosatu, ikakhulukazi unobhala wayo uMnuz Zet Luzipho usehlale kulesi sikhundla amahlandla amathathu.
UNksz Sbongile Nhlapho weCosatu uthe abasebenzi abazibangi izikhundla futhi abaphonselani inselelo ngoba okubalulekile kubo yizindaba ezithinta inqubekela phambili ngabo.
“Le ngqungquthela izothatha izinsuku ezintathu kanti izoba se-Olympia Hall, eRoyal Showground, eMgungundlovu futhi izohanjelwa yizithunywa ezingaphezulu kuka-1 000,” kusho uNksz Nhlapho.
Esitatimendeni seCosatu ithe okunye okuzobaluleka kule ngqungquthela kuzoba wudaba lwaseMangaung nokuthi lingaqiniswa kanjani izwi labasebenzi kuleya ngqungquthela ye-ANC ezobangoDisemba yokukhetha ubuholi.
Phakathi kwabaholi abasezikhundleni okungakacaci noma bazobuyela yini ebuholini besifundazwe kuyo iCosatu kubalwa uMnuz Basil Cele onguSihlalo, uMnuz John Dlamini, oyiPhini likaSihlalo, noLuzipo, osebe nguNobhala amahlandla amathathu noNkk Cynthia Joyce onguMgcinimafa.